စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ဖြေလျှော့ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ဖြေလျှော့ခြင်း
Posted by နွေဦး on Apr 5, 2014 in Health & Fitness, Society & Lifestyle |6comments
ဖြေလျှော့နိုင်ပါစေ နွေဦး အကြံပေးသည်
စိတ်ဖိစီးမှု ဆိုတာ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေကို ဖျက်ဆီးပြစ်ပြီး ဒီပူပင်ကြောင့်ကြစိတ်တွေကြောင့် ဘဝရဲ့ အရေးပါမှုတွေကို ဆုံးရှုံးစေပါတယ် ။ဒါ့ကြောင့် စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်တွေ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ဖြစ်လာရင် ဒီစိတ်တွေကို ဘယ်လိုဖြေဖျောက်နိုင်မလဲဆိုတဲ့နည်းတွေကို ရှာဖွေဖို့လိုပါတယ်။ဒါက ကျွန်တော်တို့အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။
မကောင်းတဲ့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှု စိတ်ဖိစီးမှု စိတ်သောကရောက်မှု ပူဆွေးသောက ဗျာပါရနဲ့ စိတ်မလျှော့နိုင်တာတွေက တကယ့် ပြဿနာတွေအဖြစ်နဲ့ ဒီနေ့ခေတ်မှာ လူတိုင်း ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ် ။
ခုတော့ ဒါတွေကို တစစီခွဲပြီး လေ့လာရင်း ပူပင်ကြောင့်ကြစိတ်တွေ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို တထစ်ခြင်းဖြေလျှော့နိုင် အောင် လုပ်ကြည့်မှာပါ ။
မခံစားနိုင်တဲ့ ဖိအားပေးမှုကြောင် စိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။
ပုဂ္ဂလိက ခံစားချက်တွေ စိတ်ဖိစီးမှုတွေက အလုပ်ထဲမှာ လုပ်နေကျ မဟုတ်တဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ရတာတွေ နေထိုင်နေတဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် သဘာဝပြောင်းလဲလာတာတွေ ကိုယ်နေထိုင်နေကျပုံစံကနေ ပြောင်းရတာတွေ ကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ် ။
မိသားစု မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကလည်း စိတ်ဖိစီးမှု စိတ်သောကရောက်အောင် စိုးရိမ်ပူပန်အောင် အမျိုးမျိုး လုပ်တတ်ကြပါတယ် ။ သူတို့ရဲ့ အပူတွေက တခါတခါ မိမိကို တိုက်ရိုက် ပူပင်စေတတ်ပါတယ်။
လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် မိတ်ဆွေအပေါင်းကလည်း သူတို့အပူ ကိုယ့်အပူဖြစ်အောင် လုပ်တတ်တဲ့ သဘာဝလည်းရှိပါတယ် ။
အဲဒီလိုကနေ ရလာတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေက ပျောက်မသွားဘဲ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ထဲထဲဝင်ဝင် တွေးတောကြည့်ပြီဆိုရင် ဖြေလျှော့မသွားဘဲ တဖြည်းဖြည်းတိုးလာပြီး အစိုင်အခဲလို ကြိတ်မနိုင် ခဲမရ ဖြစ်လာပါတယ် ။
စိတ်ဖိစီးမှု သေးသေးလေးကို လစ်လျှူ မရှုဘဲ တွေးရင်းတွေးရင်း အဲဒီစိတ်ပေါ်မှာ ခံစားမှု အားကြီးလာရင် စိတ်ပူပန်သောက ဖြစ်လာပါတယ် ။ ဒီပူပင်သောကစိတ်ဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို တိုက်ရိုက် လေးလံပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းတွေ ဖြစ်စေပါတယ် ။
ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါစိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချဖို့ နည်းလမ်းတွေကို ရှာကြည့်ပါတယ် ။သူ့ဒေသ သူ့ဓလေ့နဲ့ ဖြေလျှော့နည်း အစုံစုံ ရှိပေမဲ့ အခုတွေ့တဲ့နည်းက ခန္ဓာကိုယ်ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးရုံနဲ့ ကိုယ်ရော စိတ်ပါကြည်နူးမှုနဲ့ ပေါ့ပါးလန်းဆန်းစေတာကြောင့် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ပထမ အစမှာတော့ ဖြေလျှော့နည်း လေ့ကျင့်ခန်းကို လဲလျှောင်းပြီး လေ့ကျင့် ရင် ကောင်းပါတယ် ။ အလေ့အကျင့်ရရင်တော့ ဘယ်နေရာ ဘယ် ပုံစံနဲ့မဆို ဖြေလျှော့တဲ့အလုပ်ကို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သလိုမဟုတ်ဘဲ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို လွယ်လွယ်ကူကူ ပြေလျှော့ ပေါ့ပါး စိတ်ရွှင်လန်းစေပါလိမ့်မယ်…။
လွယ်ပေမဲ့ အခြေခံကို တဆင့်ခြင်းစီ လေ့ကျင့် ဖို့တော့လိုပါတယ် ။ အဆင့် ကျော်ပြီးကျန်ခဲ့မယ်ဆို သင့်ရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု ဖြေလျှော့ခြင်းဟာ ထင်သလောက်လျှော့ကျမှာမဟုတ်ပါဘူး ။ သတိပြုပြီး လုပ်ခြင်းဟာလည်း သင့်စိတ်ကို အလွယ်တကူ ပေါ့ပါးလာစေမှာဖြစ်ပါတယ် ။
စပြီးလုပ်တော့မဲ့ အခါမှာတေ့ာ တိတ်ဆိတ်ပြီး အဆင်ပြေပြေ လဲလျှောင်းလို့ရတဲ့နေရာလေးလိုပါတယ်။
သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမဲ့ အဝတ်အစားနဲ့ ဖျာ ဒါမှမဟုတ် အခင်းပေါ်မှာ လဲလျှောင်းပါ ။ခေါင်းအုံးပါပါ မပါပါ အဆင်ပြေပြေ သက်သက်သာသာနဲ့ အကြောတွေကိုလျှော့ပြီး လှဲအိပ်ပါ ။
အသက်ရှူပါ ။ အသက်ကို ဖြေးဖြေးရှူသွင်းပါ။ဝမ်းဗိုက်အတွင်းထိ လေကို ရောက်အောင်ရှူသွင်းပါ ။ ဝမ်းဗိုက်ထဲမှလေကို ဖြည်းဖြည်းခြင်းပြန်ထုတ်ပါ ။ ကိုယ်ကို တောင့်မထားဘဲ ခြေလက်တွေကို ဘေးမှာ ချထားလိုက်ပါ ။ အံမကြိတ် မျက်မှောင်မကုပ် ဇက်ကြီးတောင့်မထားပါနှင့် ။ လွယ်လွယ်ပြောရရင် ခန္ဓာကိုယ်ကို ကြမ်းပေါ် ဘုံးဘုံးကြ ချထားလိုက်ပါ ။
လေ့ကျင်ခန်းစကြရအောင်..။ လွယ်ပါတယ် အချိန်နဲနဲပေးရမယ်လို့ စိတ်ထဲမှတ်လိုက်ပါ ။ မလောပါနဲ့ ။ အဆင့်နှစ်မှာလို အသက်ရှူတာကိုတော့ မှန်မှန်လေး လုပ်နေရပါမယ်။
အောက်မှာ ဖေါ်ပြပေးမဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခြင်းစီမှာရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေကို စက္ကန့်အနည်းငယ်စီလောက် တောင့်ပြီး ညှစ် ထားပေးပါ ။
စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာလာရင် လုံးဝ ပြန်လျှော့ပေးလိုက်ပါ ။
ကြွက်သားကို ညှစ်လိုက် ခဏကြာရင် ဖြေလျှော့လိုက် နဲ့ တစ်နေရာကို နှစ်ကြိမ်လောက် လုပ်ပေးပါ။
အဲဒီနေရာလေး ပူနွေးလာတာကို ခံစားရပြီဆို နောက်တစ်နေရာပြောင်းလိုက်ပါ။
အစဉ်လိုက်လုပ်ပေးရမဲ့ ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းများ
ဘယ် ခြေဖဝါး….ခြေချောင်းလေးတွေကို ကွေးကုတ်ပြီး ကြွက်သားကို ညှစ်ပေးပါ ။စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာလာရင် လုံးဝ ပြန်လျှော့ပေးလိုက်ပါ ။
ဘယ် ခြေသလုံး ….. ကြွက်သားကို ညှစ်ပေးပါ ။စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာလာရင် လုံးဝ ပြန်လျှော့ပေးလိုက်ပါ ။
ဘယ် ပေါင် …… ကြွက်သားကို ညှစ်ပေးပါ ။စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာလာရင် လုံးဝ ပြန်လျှော့ပေးလိုက်ပါ ။
ညာ ခြေဖဝါး….ခြေချောင်းလေးတွေကို ကွေးကုတ်ပြီး ကြွက်သားကို ညှစ်ပေးပါ ။စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာလာရင် လုံးဝ ပြန်လျှော့ပေးလိုက်ပါ ။
ညာ ခြေသလုံး ….. ကြွက်သားကို ညှစ်ပေးပါ ။စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာလာရင် လုံးဝ ပြန်လျှော့ပေးလိုက်ပါ ။
ညာ ပေါင် …… ကြွက်သားကို ညှစ်ပေးပါ ။စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာလာရင် လုံးဝ ပြန်လျှော့ပေးလိုက်ပါ ။
တင်ပါးဆုံ…… ကြွက်သားကို ညှစ်ပေးပါ ။စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာလာရင် လုံးဝ ပြန်လျှော့ပေးလိုက်ပါ ။
ဝမ်းဗိုက် …… ကြွက်သားကို ညှစ်ပေးပါ ။စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာလာရင် လုံးဝ ပြန်လျှော့ပေးလိုက်ပါ ။
ဘယ်လက်….လက်သီး ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုတ်ပါ ။စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာလာရင် လုံးဝ ပြန်လျှော့ပေးလိုက်ပါ ။
ဘယ်လက်မောင်း… ကြွက်သားကို ညှစ်ပေးပါ ။စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာလာရင် လုံးဝ ပြန်လျှော့ပေးလိုက်ပါ ။
ညာလက်….လက်သီး ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုတ်ပါ ။စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာလာရင် လုံးဝ ပြန်လျှော့ပေးလိုက်ပါ ။
ညာလက်မောင်း…. ကြွက်သားကို ညှစ်ပေးပါ ။စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာလာရင် လုံးဝ ပြန်လျှော့ပေးလိုက်ပါ ။
ပုခုံးနှစ်ဘက်…..ဦးခေါင်းဘက်ကို ညှစ်ပြီးတွန်းထိုးထားပါ ။စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာလာရင် လုံးဝ ပြန်လျှော့ပေးလိုက်ပါ ။
မျက်နှာ……..ပါးစပ်ကိုသမ်းဝေသလို အကျယ်ကြီးဟပြီးခဏနေရင် ပြန်လျှော့ပေးပါ ။ နှုတ်ခမ်းစူ မျက်မှောင်ကျုံ့ပြီး စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာလာရင် လုံးဝ ပြန်လျှော့ပေးလိုက်ပါ ။အံကြိတ်ပြီး မျက်နှာမှာ ရှိတဲ့ ကြွက်သားအားလုံးကို တင်းထာပြီး စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာလာရင် လုံးဝ ပြန်လျှော့ပေးလိုက်ပါ ။
ဒီလို ကြွက်သားတွေကို အဆင့်ဆင့် ဖြေလျှော့တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်ပြီးသွားရင် ချက်ခြင်းမထဘဲ ၁၀မိနစ် ၁၅မိနစ်လောက် အေးအေးဆေးဆေးအနားယူရပါမယ် ။ ပြီးမှ အိပ်ရာက ထမယ်ဆိုရင်လဲ ဖြေးဖြေးညင်ညင်သာသာနဲ့ ခြေလက်တွေကို လှုပ်ရှားပြီးမှ ထရပါမယ် ။
ဒီအဆင့်တွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါ သင်သတိမထားမိဘဲ သင့်ရဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေက ပြေပျောက်ပြီး လန်းဆန်းတက်ကြွနေတာကို ခံစားရမှာပါ ။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေက အစပိုင်းမှာ အချိန်ယူ နေရာရွေးပြီး အလေ့ကျင့်ဖြစ်အောင် လုပ်ရမှာဖြစ်ပြီး ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ စိတ်ပင်ပန်းတဲ့အခါတွေမှာ ရုံးစားပွဲ ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်ပြီးလဲ အဆင့်ဆင့် ဖြေလျှော့သွားလို့ရနိုင်ပါတယ် ။
ကြွက်သားတွေ တင်းတယ် ဖြေလျှော့ပေးတယ်ဆိုတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကို အခြေခံပြီး အချိန်မရွေး နေရာမရွေး ဖြေလျှော့တတ်သွားမယ်ဆိုရင် သင့်အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုတွေ စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေ ဖြစ်လာဖို့ မရှိတော့ဘူးလို့ပြောနိုင်ပါပြီ…။
စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ဖြေလျှော့နိုင်ပြီး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့တဲ့ ဘဝများရနိုင်ကြပါစေ…
ကူးယူမှတ်သားသွားပါတယ် ကိုနွေဦးရေ။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ပိုစ့်ကလေးမို့ ကျေးဇူးပါ။
ကျနော် ကူးသွားပါတယ် ဦးနွေဦးးးး
ကျနော် စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေးဖူးတယ်။
ဒီမှာ အဲဒီ ဒဏ် အခံရဆုံးမို့!!
Yoga သင်တန်းပြီးရင် အဲသလိုပဲ Relax လုပ်ရတယ်။
နေလို့ သိပ်ကောင်း ၊အိပ်တောင်ပျော်ချင်ရော။
အများသူငါ အသုံးတဲ့မဲ့ပို့စ်လေးမို့ ဗရာဗိုပါ ကိုနွေဦးရေ…
ထီလှည်းတွေမှာ ရေးထားတဲ့ အမေလာပြီ ငွေပါသည်… ဆိုသလိုမျိုး
ကိုနွေဦးလာရင် အဖိုးတန်တာတွေ ပါလာတတ်တယ်။